Police Officer (Lateral/Academy Graduate… – NAB Show News by Broadcast Beat. Official Broadcaster of NAB Show, Producer of NAB Show LIVE
ikhaya » imisebenzi » Igosa lePolisa (emva kwesikhathi / i-Academy Graduate ...
Ukuvulwa kweYobhi: IGosa lePolisa (emva kwesikhathi / i-Academy Graduate ...
indawo: Igosa lePolisa (emva kwesikhathi / i-Academy Graduate ...
inkampani: Isixeko saseLa Palma, CA
Indawo: la Palma CA US
Ukwenza umsebenzi wokunyanzelisa umthetho kunye nomsebenzi wokuthintela ulwaphulo-mthetho; Lawula ukuhamba kwendlela kunye nokunyanzelisa imimiselo yommandla kunye nommandla wendlela. Wenza umsebenzi wophando; Ithatha inxaxheba kwaye inike inkxaso nenkxaso kwiinkqubo ezikhuselekileyo zolwaphulo-mthetho nokunyanzelisa inkqubo; Yenza imisebenzi ehambelana nayo njengoko kufuneka.
Olu luhlu lokungena kwinqanaba leepolisa lobuchwephesha elifuna isimo segosa loxolo. Izikhundla ezabiwe kwiKlasi yeGosa lePolisa zinikezelwa kwiindawo ezithile zokusebenza kwiSebe lePolisa; Eminye yemisebenzi eyabelwe, njengoko ichazwe yiNtloko yePolisa, ifuna amava ngaphambili kwiSebe lePolisa laseLa Palma.
INKQUBO YESICELO: Izicelo zeSixeko saseLa Palma zifuneka kwaye zifumaneke kwi-intanethi Www.cityoflapalma.org. I-Ofisi yezoLuntu i-Human Resources kufuneka ifumane izicelo ezigqityiweyo, ukuqala kwakhona, kunye nemibuzo engaphezulu (ukuba iyimfuneko) ngomhla wokugqibela wokubhala kunye nexesha elichazwe ukuba lifanele ukuqwalaselwa. I-Facsimiles ayiyi kwamkelwa. Ukuqala kwakhona akuyi kuthi, kwaye ingabonakali kwi-resume, yamkelwe endaweni yesicelo esizalisiweyo seSixeko. Ukubhekiselele kwi-repume kwifomu yesicelo kunokungahambisani nesicelo. Oku kubhaliswa ngokuvulekileyo ukusekwa kohlu lokufaneleka lokusetyenziswa kwizithuba zexesha elizayo. Esi sigxina sivulekileyo kuze kube yesaziso esongezelelweyo kwaye sinokuvala nanini na ngaphandle kwesaziso esandulelayo.
INKQUBO YOKWENZA: Zonke izicelo ziya kuhlolwa kwaye abo baviwa ababonisa iziqinisekiso ezifanelekileyo kunye nokuba neelayisenisi ezifunekayo kunye neziqinisekiso zesikhundla baya kumenywa ukuba baqhubeke kwinkqubo yokukhetha. Inkqubo yokukhetha ingabandakanya uvavanyo kunye nodliwano-ndlebe.
Uphando olusemva, kuquka uhlolo lweerekhodi lobugebengu olufunekayo lungadingwa ngaphambi kokunikezelwa kwemisebenzi. Bonke abaqeshwayo baxhomekeke ekuphunyezweni ngokuphumelelayo kokuhlolwa kwe-post-offer medical (kubandakanywa nesichengisi seziyobisi kunye nezobisi).
Ukuba umntu okhubazekileyo onokukhubazeka ufuna indawo yokuhlala ngokufanelekileyo ukuze athathe inxaxheba kwinkqubo yoviwo, iSixeko saseLa Palma kufuneka saziswe ngaphandle kweentsuku zokusebenza ezintlanu ngaphambi komhla wokuhlolwa okhethiwe.
ISixeko saseLa Palma asikhetheli ngohlanga, inkolo, umbala, isondo, ubudala, ukhokho, imvelaphi yesizwe, isimo somtshato okanye ukukhubazeka. Ithuba elilinganayo lomsebenzi liya kusebenza kuzo zonke izenzo zentsebenzo, kubandakanywa kodwa kungaphelelanga, ukuqeshwa, ukhetho, uqeqesho, ukudluliselwa, ukukhushulwa, ukuhlaziywa, ukuhlawulelwa, ukuqeqeshwa, ukuchithwa, ukuchithwa, kunye nokubuyiselwa.
PHAWULA: Bonke abasebenzi beSixeko saseLa Palma banqunywe ngumthetho weSizwe kunye neSigqeba saseSixeko ukuba sibe "abaSebenzi beeNkonzo zeNtlekele." Xa kunokwenzeka imeko engxamisekileyo okanye nayiphi na ingozi engxamisekileyo okanye yentlekele engokwemvelo eyenza ubomi, impilo kunye / okanye ukhuseleko Zoluntu, abasebenzi bangabelwa ukuncedisa abasebenzi bokuhlangula kunye nokunceda. Izabelo ezinjalo zinokuthi zibe kwindawo, ngeeyure kunye nokwenza umsebenzi ohluke kakhulu kwizabelo zabasebenzi eziqhelekileyo kwaye zingaqhubeka ngokuqhubeka kwimeko yongxamiseko.
Amalungiselelo ale ncwadana ayenzi isivumelwano esichaziweyo okanye esicacisiweyo. Naliphi na ilungiselelo eliqulethwe kule ncwadana lingatshintshwa okanye likhishwe ngaphandle kwesaziso. Iindidi kunye namanqanaba emivuzo yabasebenzi enikezelweyo, kubandakanywa iminikelo yesiXeko kwiindleko zokuxhamla, ziya kutshintsha.
Ubume bomsebenzi kunye nemizekelo yeeMisebenzi:
Ngokuxhomekeke kwisabelo, imisebenzi ebalulekileyo ibandakanya, kodwa ayinakuphela, oku kulandelayo:
Iipatroli zesiXeko kwisixhobo somsakazo esilungelelweyo, ngeenyawo, ngebhayisekile okanye ngesithuthuthu; Iimpendulo zifuna ukhuseleko lobomi kunye nepropati kunye nokunyanzeliswa kwemithetho yesiXeko, i-County, kunye neNdawo; Uqhuba uphando kwaye ulandele uphando lwezinto eziphazamisayo, abaqhamukayo, izigqeba, ubusela, ukuphanga, izingozi zithuthi, ukufa kunye nezinye iziganeko zobugebengu. Uyabanjwa njengoko kuyimfuneko; Udliwano-ndlebe kumaxhoba, izikhalazo kunye namangqina; Ibuza abantu abasolwa; Iqokelela kunye nokugcina ubungqina; Ubungqina kwaye unike ubungqina enkundleni.
Abafowunelwa kunye nabasebenzisana namanye ama-arhente okunyanzeliswa komthetho kwimicimbi ephathelele ukukhathazeka kwabaphulaphuli kunye nophando lwamacala. Ulungelelanisa iingxelo zokubanjwa, imisebenzi eyenziwe kunye neziganeko ezingavamile. Uhlola izakhiwo zokhuseleko lomzimba. Ukukhangela, iimpawu zeminwe, kunye nokuthutha amabanjwa. Ukulawula i-CPR kunye neyokuqala ngoncedo njengoko kuyimfuneko.
Ukusungula, ukukhuthaza nokugcina ubudlelwane obuhle kunye nokusebenzisana nabasebenzi bezentsebenziswano, uluntu jikelele, iikontraka, abathengisi, amaqela ommi kunye namagosa akhethiweyo.
Uncedisa ekuqeqesheni nasekuhloleni abasebenzi basepolini.
Ukujikeleza izitalato ngexesha lexesha elichongiweyo ukulawula imimiselo yokhuseleko lwezithuthi kunye nokunyanzeliswa kwemithetho yokhuseleko lomzila. Ukuqwalasela, ukubeka esweni kunye nokulawula iziganeko eziqhelekileyo kunye nezithuthi ezingavamile; Uqwalasela iimeko kunye neziganeko ezichaphazela ukhuseleko lwezithuthi kunye nokuba kuthatha amanyathelo okulungisa okanye iingxelo ezinjalo kunye neziphakamiso zokuphucula. Uyaphendula kwiifowuni ezinxulumene neziganeko zendlela kunye nezoxakeka; Uyaphendula kwaye uphando ngeengozi zezithuthi. Uncedisa kwaye ucebise abaqhubi kwizithuthi kunye nabakhuseleko bezithuthi.
Inkqubo yabanjwa; Ikhonza iziqinisekiso kunye neenkomfa; Iifayile kunye neenkqubo eziphambene nezikhalazo kunye nezikhalazo.
Ulungelelanisa kwaye uqhuba uphando olupheleleyo kunye olunzulu nolwaphulo-mthetho olubandakanya amantombazana kunye nabantu abadala, ulwaphulo-mthetho olubhekiselele kubantu kunye nepropati, kunye nolwaphulo-mthetho olubandakanya ulwaphulo-mthetho, ukudlala kunye nokuhlukumeza i-narcotics. Uthatha inxaxheba kuyo yonke imisebenzi yokuthotyelwa komthetho, kuquka ukunyanzelisa imithetho yasekhaya kunye neyelizwe, ukukhupha izibalo, ukubopha, ukuhambisa uncedo lokuqala, nokuthutha amabanjwa. Yenza imisebenzi engabonakaliyo kunye nokujonga.
Ukulungiswa kweengxelo zophando kunye nolwazi lwamacala; Banike ubungqina kunye nobungqina enkundleni; Iphendula iimpendulo imibuzo ebantwini malunga nemimiselo yasekhaya kunye neyeSizwe, iinkqubo kunye nemisebenzi yeSebe lePolisa.
Amaxhoba abadliwano-ndlebe, abafaki-zikhalazo, amangqina kunye nabasolwa; Uqokelela, ulondoloze kwaye ulondoloze ipropati efunyenweyo, indawo yokuhlala ngokukhuselekileyo, kunye nobungqina obandakanyeka kulwaphulo-mthetho olukhanyelayo; Ikhonza iimvume kunye neenkcukacha ze-subpoenas.
Ukuphuhlisa nokugcina ubudlelwane obuhle kunye noluntu, kubandakanywa i-informants kunye noonxibelelwano oluya kunceda ekuphenyweni kobugebengu.
Izicwangciso, uququzelele kwaye uthatha inxaxheba kwimfundo yokuthotyelwa komthetho kunye neenkqubo zokuthintela ulwaphulo-mthetho kuluntu jikelele; Zikolo; Mibutho yolutsha; Amaqela asekuhlaleni, amaqabane kunye noluntu.
Uphuhlisa, uqhuba kwaye uququzelela iinkqubo zoqeqesho; Uvavanya uqeqesho kunye nezixhobo zokusebenza ezihambelana. Uncedisa ekuqeshweni nasekukhetheni.
Izibhengezo zingabelwa ukuba zisebenze iindidi ezijikelezayo kunye nezijikelezayo, ubusuku, ngeveki, kwaye zifuneka ukuba zisebenze ixesha elidlulileyo njengalathwayo. Yenza enye imisebenzi njengoko yabelwe.
Ulwazi, izakhono kunye nobuchule
Ulwazi malunga: Nemigaqo-nkqubo yokunyanzelisa umthetho, inkqubo, ubuchule kunye nezixhobo; Imithetho efanelekileyo, imimiselo nemimiselo; Imigangatho yePOST.
Amandla oku: Qaphela ngokuchanekileyo kwaye ukhumbule ubuso, amanani, iziganeko kunye neendawo; Ukusebenzisa kunye nokunyamekela imipuphu; Ukucinga nokuthatha ngokukhawuleza kwiimeko ezikhawulezayo, kwaye ugwebe imeko kunye nabantu ngokuchanekileyo; Ukufunda, ukuqonda, nokutolika imithetho, imigaqo nemigaqo-nkqubo; Ukuthetha ngokucacileyo, ngokuchanekileyo, ngokukhawuleza, ngokuchanekileyo nangokuchanekileyo nokusetyenziswa kolwimi lwesiNgesi kunye nesipelingi; Ukuqikelela ukukhawuleza kwezithuthi usebenzisa ubungqina bobuqu kunye neempompe zeemathematika okanye iirafu; Ingozi yomzobo kunye nezobugebengu; Kufunda iinkqubo eziqhelekileyo zokusasazwa kwenkqubo yerediyo yamapolisa; Ukukhusela kunye / okanye ukunciphisa abantu ngokusebenzisa ubuchule be-baton, ukukhiya, ukukhangela, ukugcina okanye ukucima izixhobo, ezifana neentonga; Ukuseka nokugcina ubudlelwane obusebenzayo kunye nabo badibene nabo emsebenzini; Ukunxibelelana ngokufanelekileyo kunye neentlobo zabantu abavela kwimimandla eyahlukeneyo yeenkcubeko; Sebenzisa ingqiqo, ukuzithiba, isigwebo kunye nesicwangciso ekujonganeni nabantu abaninzi, abachasi kunye nabameli; Ukuqonda nokuqhuba izikhokelo zomlomo kunye nezibhaliweyo; Ukuhlangabezana neemfuneko zomzimba ezisungulwe liSebe; Ukubonelela ngenqanaba eliphezulu leenkonzo zabathengi.
Imfundo kunye / okanye amava
Naliphi na inhlanganisela yemfundo kunye / okanye namava anike ulwazi, izakhono kunye nezakhono eziyimfuneko. Umzekelo wokuhlanganiswa uquka:
Ukuphotyelwa kwezikolo ezivela esikolweni esiphakeme okanye amava afana nonyaka olinganayo kumsebenzi wamaPolisa kwiGosa lePolisa eliPhezulu. Akukho mava apolisa afunekayo ngaphambili. Abafaki-sicelo bezicelo kufuneka babe neSatifikethi sePOST esifanelekileyo okanye kufuneka bazalise i-POST Academy evunyiweyo kwiminyaka emithathu edlulileyo.
Iimvume ezifunekayo kunye neeSatifikethi
Ukufumana okanye ukukwazi ukufumana ilayisenisi efanele yokuqhuba yaseCalifornia kunye nerekhodi yokuqhuba eyanelisayo.
Iimfuno zoMzimba kunye neNdalo yendawo yokuSebenza:
Izidingo zomzimba kunye nomsebenzi wendawo echazwe apha zimele ezo zimele zihlangabezane nomqeshwa ukwenza imisebenzi ebalulekileyo yalo msebenzi. Ukuhlala okunengqiqo kunokwenziwa ukuba abantu abanokukhubazeka bakwazi ukwenza imisebenzi ebalulekileyo.
Imisebenzi ebalulekileyo yalesi sikhundla ifuna ukuba izikhundla ziphakame kwaye zenze iiplani ze-50 kwaye zidibanise izinto ukuya kuma-160; Ukunyuka okanye ukugxuma phezu kwezicingo, izindonga kunye nezinye izithintelo; Ukunyuka ukuya kwiindawo eziphakamileyo; Basebenzise amandla omzimba ukuze bafumane ukungena kwimimiselo; Ugijimele ukuphinda ubalekele abasabelayo. Ukudibanisana phakathi kwabantu abanobutsha okanye abanokubandezela; Sebenza phantsi kweemeko ezinobungozi okanye zexakeka, ezifana nokuqhutyelwa komsebenzi wobugebengu, ukutshintshiselwa kwezibhamu, izihlwele kunye neendibano ezingalawulekiyo, ukuhlaselwa kunye nokukhathazeka kwezigebengu eziyingozi, ukuhlaselwa okubulalayo; Ukubandakanya ngokukhawuleza ukuqhubela phambili ekuqhubeni kwimigwaqo evulekile okanye kwiindawo ezinqamlekileyo; Izithuthi ezizisebenzisayo usebenzisa izibonakaliso zesandla, izibane, izibane ezikhanyisiweyo, iintambo, izitya zomzila okanye ezinye izithintelo; Hlala uxolo kwiimeko ezixakekileyo. Amandla okubona okufunekayo ngolu hlobo lubandakanya umbono osondeleyo, umbono wembali, umbono wombala, umbono wesiphelo, ukuqonda okujulileyo kunye nokukwazi ukuguqula ingqalelo.
Imisebenzi yesi sikhundla ifuna ukuba isebenze kwiimeko zangaphandle zemozulu, kufuphi neendawo ezitshintshayo, kwiindawo eziphezulu okanye eziqhumayo. Esi sigxina sifuna ukuba kufikeleleke kwiimeko ezimanzi kunye / okanye zomshushu, iifsi okanye iindidi ezinobungozi, iicyxic okanye i-custic chemicals, ubusika obukhulu, ukushisa okukhulu, ukugubha kunye neengxolo ezinkulu.
SoftAtHome, MStar, iCES2017 Injini yeVidiyo	2017-08-31
Previous: I-Decentrix Mediabase Guardian isebenzisa isilinganiselo soLwazi lweeNkcukacha zoLungiselelo loPhuhliso lwezoShishino
next: Ukukhangela i-Shot Perfect? Iqala ngeNkxaso.
Hey Buddy !, Ndifumene le ngcaciso kuwe: "Igosa lePolisa (i-Lateral / i-Academy Graduate ..." Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/police-officer-lateralacademy-graduate/.